Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose: Xabad u joog ayaan nahay | Baydhabo Online
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose: Xabad u joog ayaan nahay
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose, Ibraahim Aadan Cali (Najax), ayaa ka hadlay weerar aan buurnayn oo gelinkii dambe ee Khamiistii, ay Shabaabku ku soo qaadeen Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Gudoomiyaha, ayaa marka hore sheegay in Ciidamada Dowladdu ay difaaceen gacan ku haynta Degmada Afgooye, isagoona meesha ka saaray in maleeshiyada Shabaabku gudaha u soo galeen degmadaasi.
Gudoomiyaha oo la hadlay BBC, ayaa dhinacooda xaqiijiyay in saddex askari kaga dhaawacantay weerarkaasi, halka ay Shabaabku uga dileen laba nin oo meydadkoodii ay ka carareen, lix kalana ay kaga dhaawaceen.
Iyadoo 18-kii bishii October ay Shabaabku weerar ballaaran ku soo qaadeen Degmada Afgooye, ayaa Gudoomiyaha wax laga weydiiyay weerarada ku soo noq noqday Afgooye iyo in iyagu ay yihiin xabad suggayaal, waxaana uu ka dhawaajiyay in rasaas u joog ay yihiin.
“Xabad u joog ayaan nahay anaga, sida rasmiga ah. Sababtoo ah shacabka ayaan difaaceynaa, oo marwalba difaacooda ayaan u taaganahay. Ciidamada waxay hubka u wataan waa in shacabka ka badbaadiyan nimankan sharwade-yaasha ah.” Ayuu yiri Ibraahim Aadan Cali.
Najax, ayaa intaa ku daray “Gobolka Shabellaha Hoose wax la dafiri karo maaha, Shabaabka meelaha ugu xoogga badan yahay weli uu ku dambeeyay, ayuu ka mid yahay gobolka. Inay Shabaab ku soo weeraran wax laga yaabo oo laga naxo maanta oo Somaliya ah maaha, laakiin inay meel qabsadaan ayaa ah wax laga naxo.”